Malunga nathi -Ghorit Electrical Co, Ltd.
I-Ghorit Electrical Co, Ltd. yasekwa ngo-2000, igxila ekwenzeni, kwintengiso kunye nakwinkonzo yeemveliso zombane eziphezulu.
IGhorit ibekwe kwi-NO. I-111 Xinguang Road, indawo yeXinguang yezoShishino, iDolophu yaseLiushi, kwiPhondo laseZhejiang, enenkunzi eyimali ebhalisiweyo eyi-109.09 yezigidi ze-CNY, egubungela indawo engaphezulu kwe-9,800m2 kunye nendawo yokwakha engaphezulu kwe-16,000m2.
I-Ghorit igxile ikakhulu kwizigaba ezi-5 zeemveliso ezinamandla ombane 6 ~ 40.5kV: ① izixhobo zombane zeHV zangaphandle; Distribution izixhobo zokusasaza inethiwekhi; ③ izixhobo zombane zangaphakathi zombane ophezulu; -Amandla ombane apheleleyo agqityiweyo asetwegegear kunye nezinto; Series ombane aphezulu ombane wokuphazamisa uthotho.
IGhorit ithatha ubuchwephesha obuphambili ekhaya nakumazwe aphesheya, kwaye izinikele ekwenzeni nasekuveliseni iimveliso zetekhnoloji ephezulu. Ngo-2012, uye wafumana Zhejiang Provincial Science and Technology Enterprise Certificate; ngo-2013, uye wafumana i-High-zobugcisa Enterprise Certificate; Ngeli xesha, ufumene inqwaba yetekhnoloji yelungelo elilodwa lomenzi wechiza. Inkampani ihlala ihambelana nombono osisiseko wokuphila nomgangatho ophezulu, ipasile i-IS09001: inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2008, i-GB / T28001-2011 / OHSAS18001: 2007 imigangatho yempilo nezokhuseleko kunye ne-IS014001: 2004 imigangatho yolawulo lokusingqongileyo; ngowama-2014 wapasisa isiQinisekiso seNkampani yeGridi yoMbuso ngokuqinisekisa iziqinisekiso zomthengisi; Ngo-2016, ufumene isatifikethi semfundo semfundo yokuthenga izixhobo ze-Inner Mongolia Electric Power (Group) Co, Ltd. Iimveliso zeGhorit zinomsebenzi omninzi wokusebenza kunye namava kwiinkalo ezahlukeneyo ezinje ngeGridi kaRhulumente, iGridi yaseMzantsi, iNkqubo yePetrokhemikhi, Inkampani yokuvelisa amandla, uLoliwe, uLawulo lukaMasipala, njl.njl. Nakwiimarike zamanye amazwe ezinjengeRussia, iUkraine, iVietnam, iKazakhstan, iNew Zealand, iPeru, iPoland, iTurkey, njl.njl.
IGhorit yakhe inkqubo yolawulo lwenethiwekhi ye-ERP ephambili kunye nenkqubo yoyilo encediswa yikhompyuter. Ngamandla ayo obuchwephesha obomeleleyo, itekhnoloji yemveliso ehambele phambili, iindlela zovavanyo ezifanelekileyo, umgangatho wemveliso ogqwesileyo, kunye nokudityaniswa neemfuno zokuphuculwa kwamandla kwasekhaya, iGhorit iyaqhubeka nokuphuhlisa itekhnoloji ekhokelela kwintengiso kunye neemveliso ezifanelekileyo ezingenaxabiso. IGhorit ibonelela abathengi ngomgangatho ophezulu, iimveliso eziphambili kunye neenkonzo ezilungileyo, kwaye yenza igalelo elikhulu kuphuhliso lweshishini lamandla.